The Voice TV Myanmar - YouTube
The Voice TV Myanmar
လက်ပံတန်းတွင် ကျောင်းသားသပိတ် ဖြိုခွဲခံရမှုမြင်ကွင်းများ
49,409 views3years ago
လက်ပံတန်းတွင် ပိတ်ဆို့ခံထားရသည့် ကျောင်းသားသပိတ် စစ်ကြောင်းကို မတ်လ ၁၀ ရက်နေ့ မွန်းလွဲ ၁ နာရီခွဲ ဝန်းကျင်တွင် ရဲတပ်ဖွဲ့မှ အင်အားသုံးဖြိုခွဲခဲ့သည်။
နံနက်ပိုင်းက သပိတ်မှောက် ကျောင်းသားများကို ဆက်လက်ချီတက်ခွင့် ပြုသဖြင့် ထွက်ခွာရန်ပြင်ဆင်နေချိန် အစိုရအဖွဲ့က ကျောင်းသားများ ရန်ကုန်သို့ ချီတက်ချိန်တွင် အလံမထောင်ရန်၊ ကားများစီတန်းပြီး မသွားရန်၊ တာဆုံအထိ လမ်းမလျှောက်ဘဲ ကားဖြင့်သွားရန် စသည့်အချက်များကို တောင်းဆိုခဲ့သည်။ အဆိုပါအချက်များကို ကျောင်းသားများက လက်မခံဘဲ ပိတ်ဆို့ထားသော အရံအတားများကို ဝင်တိုးရာမှ သပိတ်စစ်ကြောင်း ဖြိုခွဲခံခဲ့ရခြင်း ဖြစ်သည်။
ကျောင်းသားများနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ တွန်းတိုးရာမှ တုတ်၊ ခဲများဖြင့် အပြန်အလှန် ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီး ရဲတပ်ဖွဲ့က အင်အား အလုံးအရင်းဖြင့် သပိတ်စခန်းကို ဖြိုခွဲကာ ၁၂၇ ဦးကို ဖမ်းဆီးပြီး ၃၆ ဦးနှင့်အထက် ဒဏ်ရာရရှိကာ လက်ပံတန်းဆေးရုံသို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ကြောင်း လက်ပံတန်း မြို့ခံများနှင့် အဆိုပါဆေးရုံသို့ ရောက်ရှိခဲ့သူ The Voice သတင်းထောက်က သတင်းပေးပို့သည်။
သပိတ်စခန်းဖြိုခွဲရာတွင် ကျောင်းသား ၅၂ ဦး၊ ကျောင်းသူ ၁၃ ဦး၊ ဝန်းရံသူ ၆၂ ဦးကို ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားပြီး ရဲတပ် ဖွဲ့ဝင်များဘက်မှ ၁၆ ဦး ဒဏ်ရာရရှိကာ သပိတ်မှောက်ကျောင်းသားများဘက်မှ ကျားခြောက်ဦး၊ မ နှစ်ဦး
ဒဏ်ရာရရှိကြောင်း မတ်လ ၁၀ ရက် ည ၈ နာရီတွင် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနက သတင်းထုတ် ပြန်ခဲ့သော်လည်း နံပါတ်တုတ်နှင့် ရိုက်နှက် ခံခဲ့ရသော သပိတ်မှောက်ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများဘက်မှ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိမှု အခြေအနေကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းမရှိပေ။
မန္တလေး-ရန်ကုန် ပင်မသပိတ်စစ် ကြောင်းသည် ဇန်နဝါရီလ ၂၀ ရက်မှ စတင်ကာ မန္တလေးမြို့ အိမ်တော်ရာ ၁၄ ခန်း ဇရပ်မှ စတင်ထွက်ခွာခဲ့ပြီး ပုလိပ်၊ ကျောက်ဆည်၊ မြစ်သား၊ နွားထိုးကြီး၊ မြင်းခြံ၊ တောင်သာ၊ ဝဲလောင်၊ ပုပ္ပါး၊ ကျောက်ပန်းတောင်း၊ ရေနံချောင်း၊ မကွေး၊ တောင်တွင်းကြီး၊ ကြို့ပင်ကောက် စသည့်မြို့များသို့ ဖြတ်၍ ချီတက်ခဲ့ရာ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၇ ရက်တွင် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး လက်ပံတန်း မြို့သို့ ရောက်ရှိခဲ့ကြောင်း သပိတ်ကော်မတီ ထံမှ သိရသည်။ Show less
မကြီးထက် ငယ်တဲ့ လန်းတဲ့ မင်းသမီးတွေ အများကြီးရှိပါတယ် - Duration:5minutes, 32 seconds.
ရည်းစားရှိနေတဲ့ အချိန်မှာတောင် ကိုယ့်ကိုလိုချင်တဲ့သူတွေက အရမ်းများနေတာပါ - Duration:4minutes, 44 seconds.
မြေးဖြစ်သူ ဝင်းခန့်မိုးကို ချိုပြုံးဘာတွေ သွန်သင်ဆုံးမထားလဲ - Duration:3minutes, 38 seconds.
ကိုယ်လှနေတာ အမေ့ကို ကျေးဇူးတင်ရမယ် - Duration:5minutes,4seconds.
The Voice Daily ရဲ့ အောက်တိုဘာလ (၂၁) ရက်နေ့ ညနေခင်း သတင်းအစီအစဉ် - Duration:7minutes, 28 seconds.
မကွေးမြို့မှာ LED မီးထွန်းပွဲ ကျင်းပ - Duration: 76 seconds.
NLD တောင်သူလယ်သမားရေးရာ လုပ်ငန်းအဖွဲ့တွေ ဖွဲ့စည်း - Duration: 43 seconds.
မကွေးမြို့ လူထုအမှတ်သညာ ပွဲတော် - Duration: 103 seconds.
ရွှေဇင်ဝင်းကို ပြောပြတဲ့ ဟိန်းဝေယံရဲ့ အချစ်ရေးအကြောင်း - Duration:4minutes,6seconds.
ဆုငွေ ကျပ် (၃) သိန်းနဲ့ Lucky7Night - Duration:9minutes,6seconds.
“ကိုယ့်အမျိုးသမီးက ဖြိုးမြတ်အောင်ရဲ့ ပရိသတ်ပါ။” - Duration:3minutes, 45 seconds.
မို့မို့က လင်နောက်လိုက်ပြေးခဲ့တုန်းက အင်္ကျီကိုတောင် အမှတ်တရ သိမ်းထားတယ် - Duration:2minutes, 30 seconds.
လက်ပံတောင်းအရေး ဆူးလေအနီး ဆန္ဒဖော်ထုတ် - Duration: 60 seconds.
Myanmar Sunny ဖိနပ်စက်ရုံ မီးလောင်ကျွမ်းမှု - Duration: 101 seconds.
မင်္ဂလာဈေးအနီး လုံခြုံရေး စစ်ဆေးမှု - Duration: 41 seconds.
ဝန်ကြီးများရုံးမှ အိုဘားမား ထွက်ခွါ - Duration: 23 seconds.
ဗန္ဓုလပန်းခြံရှေ့ ကျောင်းသားသပိတ်စခန်းဖွင့် - Duration:4minutes, 24 seconds.
တောင်ကြီး - မီးပုံးပျက်ကျမှု - Duration: 68 seconds.
လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာ ဆူးလေအနီး အဖွဲ့အစည်း ၂၀ကျော် ဆန္ဒဖော်ထုတ် - Duration:2minutes, 16 seconds.
ရန်ကုန်စည်ပင် ကော်မတီ ကျမ်းကျိန်ခြင်း အခမ်းအနား - Duration: 52 seconds.
ဘင်္ဂါလီအရေး ကုလဆုံးဖြတ်ချက် ရန်ကုန်မှာကန့်ကွက် - Duration: 25 seconds.
မိကျောင်းကန်သပိတ်စခန်း အပြီးဖြိုပြီ - Duration: 68 seconds.
ရွှေပြည်သာရှိ အလုပ်သမားသပိတ်စခန်းကို ရဲတပ်ဖွဲ့ ဖြိုခွဲ - Duration: 72 seconds.
လက်ပံတန်းတွင် ကျောင်းသားသပိတ် ဖြိုခွဲခံရမှုမြင်ကွင်းများ - Duration:3minutes, 22 seconds.
ချစ်သူ အောင်ရဲလင်းအ​ကြောင်း ရှင်းပြတဲ့ Beauty Blogger နေခြည်ဦး - Duration:2minutes,9seconds.
“တစ်သက်လုံး ထိန်းလာတဲ့ အရှက်တွေ ကွဲကုန်တယ်”ဆိုတဲ့ ဖွေးဖွေး - Duration:3minutes, 34 seconds.
အချစ်ရေးအကြောင်းလည်း ရှိပါတယ်။ ပညာရေးကိုတော့ အဓိက အားစိုက်နေတယ်ဆိုတဲ့ ယွန်းဝတီလွင်မိုး - Duration: 100 seconds.
ငွေတစ်သောင်းချေးပြီး Myanmar Idolလာပြိုင်ခဲ့ရတဲ့ ဖြိုးမြတ်အောင် - Duration:4minutes, 44 seconds.
“၂၀၁၃ ခုနှစ်ကတည်းကခင်လာကြတဲ့ ကျော်ကျော်နဲ့ ဆုမြတ်နိုးဦးတို့ရဲ့ Friendship Goal” (အပိုင်း-၁) - Duration:4minutes, 23 seconds.
သရုပ်ဆောင်ပိုးအိအိခန့်နဲ့တွေ့ဆုံခြင်း - Duration:4minutes, 10 seconds.
“ပန်းကန်ပြားနှစ်ချပ်၊ ခြင်ထောင်တစ်လုံးနဲ့ ဘဝကိုစခဲ့ရတဲ့ ခင်လှိုင်နဲ့မအေးအေးပြုံး” - Duration:4minutes, 56 seconds.
သရုပ်ဆောင် မင်းသွေးရဲ့ နာရေးမြင်ကွင်းပုံရိပ်များ - Duration:2minutes, 17 seconds.
ဖေဖေခင်လှိုင်ပြောတဲ့ သမီးလေးသဇင်ထူးမြင့်အကြောင်း - Duration:5minutes, 19 seconds.
နားလည်မှု၊ ဖေးမကူညီမှုတွေနဲ့ ရှေ့ဆက်နေတဲ့ အောင်လနဲ့ ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း - Duration:3minutes,5seconds.
သေခြင်းတရားကို အကောင်းဆုံး ရင်ဆိုင်ချင်သူတွေကြည့်ကြရမယ့် “ကြောက်ကြောက်ကြောက်”ရုပ်ရှင် အကြို ခံစားမှု - Duration:3minutes,6seconds.
အိမ်ထောင်သက်တမ်းလေးဆယ့်ငါးနှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ဦးချစ်ပြုံးနဲ့ ဂွမ်းပုံကြီး - Duration:4minutes, 28 seconds.
Myanmar Celebrity - Channel
AKonThi Media - Channel
Cele YatKwat - Channel
Trend Myanmar - Channel
Myanmar Cele Crazy - Channel
Eleven Broadcasting - Channel